Isibonakude sasemkhathi esiholwa yi-UK ukuthola ukuthi ama-exoplanet enziwa ngani - Micro-Semiconductor.com
Isibonakude sasemkhathi esiholwa yi-UK ukuthola ukuthi ama-exoplanet enziwa ngani
Ibizwa ngokuthi i-Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey, noma i-Ariel.
Ukulandela uxhaso lukahulumeni, izikhungo zocwaningo zase-UK - kufaka phakathi i-UCL, iSALAL and Technology Facilities Council's (STFC) RAL Space, uMnyango Wezobuchwepheshe kanye ne-UK Astronomy Technology Centre, iCardiff University kanye neYunivesithi yase-Oxford - zizodlala indima ebaluleke kakhulu kule mishini.
Inhloso ka-Ariel ukuqonda ukuxhumana phakathi kwamakhemikhali eplanethi kanye nemvelo yayo ngokufaka ishadi lamaplanethi ayi-1 000 awaziwayo ngaphandle kweSolar System yethu. I-UK Space Agency (UKSA) ilindele ukuthi lokhu kuzohlinzeka ososayensi ngesithombe esicacile salokho okwenziwe ngama-exoplanet, ukuthi akhiwa kanjani nokuthi azoguquka kanjani.
Ukwenza isibonelo, u-Ariel wayekwazi ukuthola izimpawu zezithako ezaziwayo emkhathini wamaplanethi njengomphunga wamanzi, isikhutha kanye ne-methane. Izophinda ithole izakhi zensimbi ukuze kutholakale indawo yonke yamakhemikhali esistimu yelanga ekude.
Ngenani elithile lamaplanethi, kusho i-UKSA, i-Ariel izophinde yenze ucwaningo olunzulu ngezinhlelo zayo zamafu futhi ifunde ngokuhlukahluka kwesimo sezulu kwansuku zonke nosuku.
"Singabantu besizukulwane sokuqala abakwaziyo ukutadisha amaplanethi azungeze ezinye izinkanyezi," kusho uSolwazi Giovanna Tinetti, Umphenyi Oyinhloko we-Ariel wase-University College London. “U-Ariel uzosebenzisa leli thuba eliyingqayizivele adalule isimo nomlando wamakhulu emihlaba ehlukahlukene emthaleni wethu. Manje sesingangena esigabeni esilandelayo somsebenzi wethu ukwenza lo msebenzi ufezeke. ”
Uma seyi-orbit, i-Ariel izokwabelana ngemininingwane yayo nomphakathi jikelele.
Izithombe ezingenhla ziyisibonelo se-spectrum u-Ariel angalinganisa ekukhanyeni okudlula emkhathini we-exoplanet.
U-Ariel ubelokhu enza inqubo yokubuyekeza unyaka wonke wezi-2020 futhi manje uhlelelwe ukwethulwa ngonyaka ka-2029.
"Ngenxa yoxhaso lukahulumeni, lo mkhankaso oholwa yi-UK uzobeka phambili ucwaningo olukhulu lwamaplanethi ngaphandle kweSolar System, futhi luzokwenza ososayensi bethu abahamba phambili bezikhala bakwazi ukuphendula imibuzo ebucayi ngokwakhiwa nokuvela kwabo," kusho uNgqongqoshe Wezesayensi u-Amanda Solloway.
“Kungubufakazi bomsebenzi ogqamile womkhakha wasemkhathini wase-UK, ososayensi bethu abangakholeki nabaphenyi abaholwa yi-University College London kanye ne-RAL Space kanye nabalingani bethu bamazwe omhlaba ukuthi le nhloso‘ iyasuswa ’. Ngibheke phambili ekuyibukeleni iqhubekela phambili ukwethulwa ngo-2029. ”
Eminye imihlaba engama-4,374 isiqinisekisiwe ezinhlelweni ezingama-3 234 selokhu kwatholwa izazi zokuqala zakuqala ngawo-1990, kusho i-UKSA.
Izithombe: I-ESA / STFC RAL Space / UCL / UK Space Agency / ATG Medialab